Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 24/06/2019
(နေပြည်တော်၊ ၂၄-၆-၂၀၁၉ ရက်)Meeting of UEHRD committee’s Task Forces is held
Yangon June 22
A meeting between UEHRD committee members and Task Forces was held at the National Reconciliation and Peace Center in Yangon on 22 June 2019.
At the meeting, Union Minister Dr. Win Myat Aye said that UEHRD wasanational movement implemented under the leadership of the Union Government with the cooperation of the people, private sector, local NGOs and CSOs, partner countries, United Nations agencies and INGOs. ASEAN had conducted preliminary assessment to cooperate with Myanmar in the repatriation process and was implementing the three future work processes of raising the capacity of government departments conducting repatriation works, distribution of news and information and implementing development works.
He also added that it was important to show the world how UEHRD Task Forces were cooperating and coordinating with countries of the ASEAN region in Rakhine State. All were urged to participate in working for socio-economic development, social cohesion and rule of law in Rakhine State.
Later, UEHRD Task Forces members made brief presentations about their respective tasks, difficulties faced and future works.
UEHRD ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD) ကော်မတီ၏ ကော်မတီဝင်များနှင့် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Task Force) များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို ဇွန်လ ၂၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးက UEHRD ကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပြည်သူများ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ပြည်တွင်း NGO နှင့် CSOများ၊ မိတ်ဖက်နိုင်ငံများ၊ ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများ၊ INGOs များ အားလုံးအတူတကွ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံမှ ပြန်လည်လက်ခံရေး လုပ်ငန်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် ဆန်းစစ်လေ့လာမှုများ ဆောင်ရွက်ပြီး ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အစိုးရဌာနများနှင့် ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် ဖြန့်ဝေပေးခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ခြင်းဟူသည့် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် (၃)ရပ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ UEHRD ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ များအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်လျှင် အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံများနှင့် ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းကို ကမ္ဘာက သိအောင် ပြသရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (Socio-Economic Development)၊ လူမှုသဟဇာတဖြစ်ရေး (Social Cohesion) နှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး (Rule of Law) အတွက် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အားလုံးဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြရန် တိုက်တွန်းပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
ယင်းနောက် UEHRD ကော်မတီလုပ်ငန်းအဖွဲ့များက မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများ၊ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့် အခက်အခဲများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။